Milan iyo Monaco oo qarka u saaran in ay isku badashaan Andre Silva iyo Radamel Falcao. | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Milan iyo Monaco oo qarka u saaran in ay isku badashaan Andre Silva iyo Radamel Falcao.
(09-06-2018) Waxaa aad isku soo taraya wararka sheegay in uu Goordhow dhici doono heshiis kala badalasho Cayaartoy ah oo dhex maraya kooxaha AC Milan iyo AS Monaco kooxahaas oo dhawaan qaatay shirar isdaba joog ah oo aan kala Go lahayn.
Warbaahinta Talyaaniga ayaa sheegeysa in Goordhow lagu dhawaaqi doono heshiiska ay ku kala Wareegsanayaan labada kooxood Xiddigaha Weerarka ka dheela ee kala ah Andre Silva iyo Radamel Falcao.kuwaas oo sidoo kale doonayo in uu ka dheelo Horyaal cusub.
Heshiiskaan sidoo kale waxaa dabada ka riixaya Wakiilka labada Cayaaryahan oo lagu Magacaabo Jorge Mendes kaas oo ku qasabanaaday in uu Naadi cusub u baadi goobo Andre Silva oo diidey in uu aado Horyaalka England oo ay kooxo badan ka doonayeen waxaana heshiiska labada kooxood laga dhigi doonaa mid amaah ahaan ay u kala qaateen labada Cayaaryahan maadaama AC Milan aysan soo iibsan karayn Cayaartoy lacag badan Joogta.